ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၉၀ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၉၀
(အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၁၉၉၀ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည်၊ ၁၉၆၀ခုနှစ် နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီးစဉ်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း၃၀အတွင်း ပထမဦးဆုံး ပါတီစုံပါဝင်သည့် ပြည်လုံးကျွတ် ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံ၏ ပါလီမန်အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရန်မဟုတ်ဘဲ၊ ပါလီမန်အရွယ်ရှိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကော်မတီမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
၂၇ မေ ၁၉၉၀ → ၂၀၁၀
ပါလီမန်၏ ၄၉၂ နေရာအားလုံး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးသာကျော် ဦးခွန်ထွန်းဦး
NLD တစည SNLD
၀ ၀ ၀
၃၉၂ (ပြည်သူ့) ၁၀ (ပြည်သူ့) ၂၃ (ပြည်သူ့)
၇ ၉၄၃ ၆၂၂ ၂ ၈၀၅ ၅၉၉ ၂၂၂ ၈၂၁
၅၈.၇% ၂၁.၂% ၁.၇%
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဝန်ကြီးချုပ်
ရွေးကောက်ပွဲတွင် အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ယှဉ်ပြိုင်သည့် နေရာ ၄၉၂ ခုတွင် ၃၉၂ ခုဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်တွင် အုပ်စိုးနေသည့် စစ်အစိုးရ (နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထိ အမည်ပေးထားသည့်) မှ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အား အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပေ။ လာရောက် မဲပေးခဲ့သူရာခိုင်နှုန်းမှာ ၇၂.၆% ထိရှိခဲ့သည်။
၂ မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့် ပါတီများ
၂.၁ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ
၃ ရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်များ
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည့် ပါတီဝင်
စဉ် ပါတီအမည်များ ယှဉ်ပြိုင်သည့်ဦးရေ
၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၃၉၂ ဦး
၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂၃ ဦး
၃ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၁၁ ဦး
၄ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ၁ဝ ဦး
၅ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ၅ ဦး
၆ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၄ ဦး
၇ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၃ ဦး
၈ ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၃ ဦး
၉ ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ၃ ဦး
၁ဝ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ ၃ ဦး
၁၁ ဇိုမီးမျိုးသားကွန်ဂရက် ၂ ဦး
၁၂ နာဂတောင်တန်းဒေသတိုးတက်ရေးပါတီ ၂ ဦး
၁၃ ကယားပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂ ဦး
၁၄ တအောင်း (ပလောင်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂ ဦး
၁၅ ကယန်းအမျိုးသားများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ၂ ဦး
၁၆ ဒီမိုကရေစီပါတီ ၁ ဦး
၁၇ ဒီမိုကရက်တစ် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရနှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ ၁ ဦး
၁၈ မျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းများအဖွဲ့ ၁ ဦး
၁၉ ကရင်ပြည်နယ်အမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ် ၁ ဦး
၂၀ ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၁ ဦး
၂၁ ပြည်ထောင်စု ဓနုအမျိုးသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၁ ဦး
၂၂ ကမန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၁ ဦး
၂၃ မရာပြည်သူ့ပါတီ (မ ပ ပ) ၁ ဦး
၂၄ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီ ၁ ဦး
၂၅ မြို (ခေါ်) ခမိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ( မ ခ မ ည ဖ) ၁ ဦး
၂၆ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၁ ဦး
၂၇ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၁ ဦး
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ-
၁ ကချင်ပြည်နယ် ဦးတင်မြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကာမိုင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၂ ကချင်ပြည်နယ် ဦးဂျီဘောင်မ်လှန်း ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ချီဗွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၃ ကချင်ပြည်နယ် ဦးမဖန်းဆင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါ်ဘူဒဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၄ ကချင်ပြည်နယ် ဦးမုတ်မြော်ဆန်းခေါင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဆာ့လော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၅ ကချင်ပြည်နယ် ဦးဇော်အိန် ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၆ ကချင်ပြည်နယ် ဦးအင်ဝမ်ခန်းဇော်ထောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တနိုင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၇ ကချင်ပြည်နယ် ဦးအမ်ဆင်ဆားရ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ နောင်မွန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၈ ကချင်ပြည်နယ် ဦးယောစီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပူတာအိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၉ ကချင်ပြည်နယ် ဦးပုထွေး (ဗန်းမော်ညိုနွဲ့) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗန်းမော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၁၀ ကချင်ပြည်နယ် ဦးမြမောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)
၁၁ ကချင်ပြည်နယ် ဦးဦးဗျစ်တူး ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)
၁၂ ကချင်ပြည်နယ် ဦးထွန်းကြည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မိုးကောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၁၃ ကချင်ပြည်နယ် ဦးကျော်မောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မိုးညှင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)
၁၄ ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မိုးညှင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)
၁၅ ကချင်ပြည်နယ် ဦးသောင်းငွေ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မိုးမောက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၁၆ ကချင်ပြည်နယ် ဦးဂျေအမ်နော်လာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မံစီမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၁၇ ကချင်ပြည်နယ် ဦးအင်နန်းဂမ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မချမ်းဘောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၁၈ ကချင်ပြည်နယ် ဒေါ်စိန်တင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွှေကူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၁၉ ကချင်ပြည်နယ် ဒူဝါ အမ် ဇော်အောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၂၀ ကယားပြည်နယ် ဦးခင်မောင်ချို ကယားပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒီမောဆိုးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)
၂၁ ကယားပြည်နယ် ဦးဗစ်တာလေး ကယားပြည်နယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒီမောဆိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)
၂၂ ကယားပြည်နယ် ဦးစောဦးရယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဖရူဆိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၂၃ ကယားပြည်နယ် ဦးစောတာရူးတူး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ဖာဆောင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၂၄ ကယားပြည်နယ် ဦးအောင်သိန်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ဘောလခဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၂၅ ကယားပြည်နယ် ဦးအောင်တင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရှားတောမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
၂၆ ကယားပြည်နယ် ဦးဘိုးသင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွိုင်ကော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)
၂၇ ကယားပြည်နယ် ဦးတက်ဒီဘူးရီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွိုင်ကော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)
↑ Steinberg, David (2010). Burma/Myanmar - What Everyone Needs to Know. Oxford University Press, 90–93. ISBN 978-0-19-539067-4။
↑ Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p611 ISBN 019924958
↑ ပါတီစုံအထွေထွေဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်း၊ ခင်ကျော်ဟန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ ရေနံချောင်း(၂)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့(မြန်မာနိုင်ငံ) စုစည်းပြုစုတင်ပြမှု၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ပြန်ကြားရေးကော်မတီမှ ထုတ်ဝေသည်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါတီစုံ_ဒီမိုကရေစီ_အထွေထွေ_ရွေးကောက်ပွဲ၊_၁၉၉၀&oldid=359091" မှ ရယူရန်
၃ ဧပြီ ၂၀၁၇၊ ၁၀:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဧပြီ ၂၀၁၇၊ ၁၀:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။